Ku qulqulaya Linux adoo adeegsanaya DLNA | Laga soo bilaabo Linux
Muuqaalka telefishannada taasi waa akhri waxyaabaha ku jira internetka, gaar ahaan iyada oo loo marayo DLNA. Waa lama huraan in PC-yadayada laga dhigo wax yar server faylasha si aad toos uga daawan kartid TV-ga (fiidiyowyada, sawirada, muusigga, iwm.) .Haddii aad leedahay TV ama qalab kale oo taageera DLNA oo aad ka daashay wareejinta feylasha ku jira saxanka USB, halkan waa xal.
Marka hore qeexitaan kooban ee DLNA. DLNA (Isbahaysiga Digital Network Network Alliance) waa urur ay ku mideysan yihiin elektaroonik iyo soosaarayaasha kombuyuutarrada oo isku raacay in la abuuro nooc jaangooyo is waafajin kara dhammaan nidaamyadooda. DLNA waxay u oggolaaneysaa aaladaha kala duwan ee isku shabakad isku mid ah inay isku xirmaan midba midka kale si uu ula wadaago waxyaabo kala duwan. Faa'iidada ay ku bixin karto waa qaabeyn fudud iyo iswaafajin. Nidaamkani wuxuu ka shaqeyn karaa shabakadaha Wi-fi iyo Ethernet labadaba.
Halkan waxaan ku soo jeedinayaa xal buuxa oo otomaatig ah, oo ka kooban adeegsiga barnaamijka MiniDLNA. Waxay ku saabsan tahay wadaagista galka wax walbana oo ay ka kooban tahayna waxaa laga dhigayaa mid u muuqda kombuyuutarrada shabakadda ku jira. Kaliya waa inaan u sheegno softiweerka la doorto ee la door bidaayo si loo kaydiyo wax kasta oo ku jira galka (yada) aan wadaagno Barnaamijkani wuxuu ku shaqeeyaa Linux waana lacag la'aan.
Waxaan fulinaa amarrada soo socda asal ahaan:
apt-get -y rakib dhisid-muhiim ah apt-get -y rakib libavutil-dev libavcodec-dev libavformat-dev libflac-dev apt-get -y rakib libvorbis-dev libid3tag0-dev libexif-dev apt-get -y rakib libjpeg62- dev libsqlite3-dev
Markaas waa inaad kala soo baxdid miniDNLA koodhka isha, fiiq oo soo uruuri:
. / qaabee samee samee rakib cp linux / minidlna.init.d.script /etc/init.d/minidlna chmod 755 /etc/init.d/minidlna cusboonaysiinta-rc.d minidlna cilado
Markii aan rakibno waxaan ku hagaajinaynaa adoo sixid u ah faylka /etc/minidlna.conf
iyo in la bilaabo
Markii lagu rakibo adeeg ahaan, haddii aan dib u bilowno kombuyuutarka, MiniDLNA ayaa iskeed u bilaabmi doonta. Ma jiraan wax intaa ka badan oo la sameeyo.
source: Farsamo yaqaanno Linux ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Ku qulqulaya Linux adoo adeegsanaya DLNA
Kadib markii aad isku dayday Mediatomb, Minidlna, Ushare. Markaan haysto kun iyo hal dhibaato oo aan si sax ah ugu hagaajiyo, qaar ayaan ku guulaystay inay ka shaqeeyaan, ka dib muddo dheer oo aan la dagaallamayay faylasha qaabeynta, haddii aysan ahayn hal shay waa mid kale, kuwa kale xitaa kama aanan helin inay ka soo muuqdaan taleefankayga Samsung.
Laakiin waxaan helay RYGEL, waxay ku taal xarunta softiweerka, waa inay ku rakibaan dhamaan wixii ku jira, waana taas. Codsi "qaabeynta rygel" ayaa adiga laguu abuuray, markii aad furto waxaad heleysaa daaqad aad ku doorato fayllada aad rabto inaad la wadaagto (adigu markii horeba waxaad dooratay faylalkaaga warbaahineed ee badan) iyo liiska hoos-hoosaadka ah ee aad ku dooranayso nooca isku xirka (wlan0, eth0 iwm ...) waxaad siisaa si aad wax u keydiso wax walbana way shaqeeyaan saxanyeeeeeee.
Ka dib markii aan la dagaallamey 3-dii hore, waxay ila muuqatay wax lala yaabo inaysan helin wax sidaas u fudud, taas oo ah 3 guji inaad horeyba u haysatay inay shaqeyneyso. oo ha ku wareegin wax ka beddelka feylasha qaabeynta illaa aad waalan tahay.
Iyo waxa ugu weyn ayaa ah inay jiraan wax macluumaad ah oo ku saabsan isaga oo ku saabsan bogagga ku qoran Isbaanishka.
Ku soo jawaab Canuteiro
Haye, waxaan rakibay rygel oo waxaan hayaa doorbidka rygel. Hadda maxaan sameeyaa si aan ugu ciyaaro feylasha shabakadda? Barnaamijkee ayaan isticmaalaa? Waxaan ahay newbie sidaa darteed sharraxaadyadu waa cad yihiin oo fudud yihiin. Aad baad u mahadsantahay
Qalabka u hoggaansamaya DLNA uma baahna wax la mid ah "barnaamij". Haddii aad leedahay telefishin dhexdhexaad ah, tusaale ahaan isla isla liiska waxaad ka heli doontaa xulashooyin aad ku ogaan karto server-yada DLNA, ku hel faylashooda oo aad ku ciyaari kartid. Waxay lahaan karaan magacyo kale, laakiin macluumaadkaas gaarka ah waxay u taalaa soo saarahaaga inuu xaliyo oo uu faahfaahin kaa siiyo. ma bixin kartid jawaab guud, macno badan ma samaynayso.
Ku jawaab alister
Waad ku mahadsantahay waxaan Rygel ku rakibey Debian waxayna u shaqeysaa si qumman! Waxaan horeyba uga quustay inaan awoodo inaan daawan karo feylasha badan ee TV-ga.
Waa lagusoo dhaweynayaa, champ.
Louis cas dijo
Salaan. Waxaan rakibay Rygel si aan ula wadaago filimada ku keydsan kumbuyuutarkeyga adag ee PC-ga (ntfs) mana jirto wado lagu arko faylka la yiraahdo ka qaataha (Android). Waxay i tuseysaa fayllada sida caadiga ku yimaadda (muusig, fiidiyowyo iyo sawirro), laakiin ma arki karo galkaas kumbiyuutarka kale ee adag. Qofna wuu ogyahay waxa dhibka noqon kara? Mahadsanid!
Jawaab Luis Rojo
aniga ima aqriyo avi ...
Jawaab Dario Soto
cusboonaysii libavcodec, libavformat, dhammaan libav, kaalay
waa maxay-ku habboon-helidda?
Tani waxay sidoo kale iga caawineysaa inaan la wadaago fayllada shabakadda sidii aan ka sameynayay samba?
Qaab dhismeedkan waxaan ka arki karaa waxyaabo badan oo warbaahintu ka kooban tahay konsol sida ps3 ama 360?
-y waa inaad had iyo jeer ka jawaabto haa dhammaan su'aalaha amarka
Sideed u rakibtaa oo aad u habeysaa PS3 Media Server?
Waxaan abuurayaa codsi aan ku soo saaro waxan oo dhan maadaama aan ugu isticmaali karo php.
Manjaro - Arch qofna ma garanayaa sida loo sameeyo?
ka raadi AURs rygel inaad dhab ahaan haysato qaar
Qalabaynta ayaa maqan ka hor make #troll
haddii kale, kaamil ah! mahadsanid
Adeegso waxa aad ugu jeceshahay dijo
Waxaan u qorayaa faallooyinkaan, sidaa darteed haddii qof uu qabo dhibaato la mid ah isticmaalka dlna ee smartv-kooda sidii aan markii hore ugu haystay kde plasma, maadaama lint mint aan dhib ku qabin socodsiinta arjiga, laakiin waxaan u haajiraa kde waxtarka ay ku bixiso telefoonkaaga kula xiriir kde wakhti kasta usb, wifi ama hostpot.
Waa hagaag waxaan haystay dhibaatada ah inaan awoodo inaan ku ordo rygel gudaha kde plasma, xitaa isku dayo badan ka dib waxay go'aansatay in la joojiyo socodsiinta arima badan, sida terminalka, feylasha bogga, iyo ogaanshaha ama xarunta softiweerka.
Codsiga maareeyaha xirmada muon ee lagu rakibay si caadi ah kde plasma, mashiinka raadinta ayaa raadinaya rygel wuxuuna soo dejinayaa dhammaan baakadaha muuqda oo diyaar u ah inuu rygel ordo oo uu adeegsado telefishankaaga smart. caawimaad kasta oo ay u baahan yihiin inay qoraan wg000050@gmail.com
Isticmaalka minidlna iyo rygel waxay ku jihaysan yihiin inay sameeyaan isla natiijada, si loo saxo minidla waa inaad nano u isticmaashaa halka rygel waxaa jiri doona daaqad ka fududahay isticmaalkeeda adiguna waxaad go aansataa feylasha aad muujineyso iyo nooca network ee kuxiran wlp3s0
Kajawaab Isticmaal waxa aad ugu jeceshahay
Kordhinta Sawirka cusub